Nhare Usashevedze maRejista
China, January 20, 2011 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Zvinotaridza sekunge nhamba dzenhare dzinogona kuwedzerwa kuIndiana's Usashevedze registry munguva pfupi. Iko hakuna izwi parizvino kuti kana kwete izvi zvinokanganisa mameseji futi, asi hapana mubvunzo kuti izvi zviri kukona kona.
The United Kingdom uye Kanadha yatove inosanganisira nhare mbozha mune yavo inoremekedza Usashevedze marejista. MuUnited States, vese Utah neMichigan vane Usashevedze marejista izvo zvinosanganisira kufona nharembozha neSMS kare. Mune maonero angu, ndinotenda kuti idzi inyaya huru. Ini ndagara ndiri mutsigiri wemvumo-based kushambadzira. Nekugamuchirwa kukuru kwemafoni nhare nevanhu vadiki, isu taifanira kunge takagadza DNC marejista makore apfuura. Ehezve, ipapo makumi emamirioni emadhora emadhora ekubhadharisa kune zvisiri pamutemo nhare mbozha yaigona kunge isina kuunganidzwa.
Izvi zvakakosha kune vese vatengesi uye vanopa rubatsiro. Kana iwe uri kushandisa yezwi mameseji kana mameseji mameseji masevhisi, iwe uchazoda kuona kuti sevhisi yako irikuchenesa rejista manhamba kubva kutumira mameseji. Walter Meyer, Mutungamiri uye COO weVontoo - rinotungamira izwi uye kutumira mameseji meseji vakati kambani yavo inosefa kufona kunopesana nehurongwa hwehurumende nehurumende DNC.
Chinhu chekuchengetedza mupfungwa ndechekuti kana kambani yakanyorera mvumo yekutaurirana nemumwe munhu, vanogona kuzviita kunyangwe kana nhamba yemunhu iyeye iri paDNC. Walter Meyer, Vontoo.
Walter anowedzera kuti iye wese ndeweUsasanganise runyorwa rwe snail mail (postal) neemail, zvakare… kukunda kwevatengesi vane hunhu uye neruzhinji rwevanhu. Walter akakurukura nematambudziko ezwi rekushambadzira uye akati kunyangwe Vontoo ane nhoroondo yekutarisa kushambadza, kukura kwavo kwakasimba kuri mune zviyeuchidzo, zviziviso, uye ongororo.
Izvo zvakakosha kuti uzive kuti Usashevedze marejista haazvibate nenzira yakafanana neemail. Neemail, unogona kutumira email yekutanga sekureba uine nzira yekusarudza. Parizvino, aya ndiwo mashandisiro atinoita mameseji… iwe unofanirwa kupinda-kuti utambire meseji uye unogona kubuda chero nguva. Kamwe marejista (uye faindi dzinotevera) dzave panzvimbo, haugone kana kutumira iwo wekutanga meseji - zvikasadaro unoisa pangozi zvimwe zvikwereti zvechikara!
Heino runyorwa rwekuti iwe kwaunogona kuwana iyo Usadaidze zvinyorwa nehurumende: Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Florida, Georgia, Idaho, Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Massachusetts, Maine, Michigan, Minnesota, Missouri, Mississippi, Montana, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Wisconsin uye Wyoming.
The federal Usasheedze registry yeUnited States parizvino haichengetedze vatengi ve nhare… asi ndine chokwadi chekuwedzera kwemaserura nekutumira mameseji kwave pedyo.
Sanganisa WordPress neBlog Kutaura Radio